मेस्सीका १० क्षण: म्याराडोना बिर्साउने गोलदेखि किर्तिमानसम्म – nepaljagaran.com
मेस्सीका १० क्षण: म्याराडोना बिर्साउने गोलदेखि किर्तिमानसम्म
नेपाल जागरण । १० भाद्र २०७७, बुधबार मा प्रकाशित
काठमाडौँ। अर्जेन्टिनी कप्तान लियोनल मेस्सीले बार्सिलोना क्लव छोड्ने इच्छा व्यक्त गर्दै मंगलबार पत्र लेखे । यसको अर्थ नोउ क्याम्पमा १६ वर्षको करियर, जसमा उनले ३४ ट्रफीहरु र ६३४ गोल हासिल गरे, टुंग्याउन उनी तयार भएका छन् ।
बार्सिलोनामा खेल्दा ६ पटक बालोन डे ओर अवार्डसँगै मेस्सीको केही विलक्षण उपलब्धीहरु छन् । गत समरमा बीबीसीले बार्सिलोना र अर्जेन्टिनाका लागि मेस्सीको १० उत्कृष्ट क्षण सार्वजनिक गर्दै त्यसलाई क्रमैसँग राख्न भनेको थियो । पाठकहरुकै मतका आधारमा बीबीसीले त्यसलाई १ देखि १० सम्म क्रमबद्ध रुपमा राखेको छ ।
१. एकै वर्ष ९१ गोल
मेस्सीले सन् २०१२ को एकै वर्ष कीर्तिमानी ९१ गोल गरेका थिए । जसमा उनले ७९ गोल बार्सिलोनाका लागि र १२ गोल अर्जेन्टिनाका लागि गरेका थिए ।
त्यही उपलब्धीले गर्दा मेस्सीले लगातार चौथो पटक बालोन डे ओर प्राप्त गरेका थिए । यद्यपी यी सबै गोलमार्फत उनले २०१२ मा कोपा डेल रे मात्र जिते ।
२. पहिलो ह्याट्रिक
मेस्सीको पहिलो ह्याट्रिक क्लव फुटबलकै ठूलो खेलमा भएको थियो । टिनएजर मेस्सीले सन् २००७ को एलक्लासिकोमा बार्सिलोनाका लागि सबै ३ गोल गरेका थिए र त्यो नोउ क्याम्पमा पहिलो थियो । अन्तिम मिनेटमा उनले केही डिफेन्डरहरुलाई बिट गर्दै गोल गरेका थिए । उक्त खेल ३–३ को बराबरीमा सकिएको थियो । त्यही क्षणले गर्दा नै उनी घर–घरमा चिनिने भएका थिए ।
३. सर्वोत्कृष्ट गोल
१३ वर्षअघि कोपा डेल रेको सेमिफाइनल पहिलो लेगमा मेस्सीले गरेको गोल सम्भवत अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट मानिन्छ । यो गोल सन् १९९६ को विश्वकपमा डिएगो म्याराडोनाले इंग्ल्याण्ड विरुद्ध गरेको एकल गोल जस्तै थियो । मेस्सीले गेटाफेविरुद्ध मैदानमा आफ्नै भागबाट बल लिएर पाँच डिफेण्डर छलाएर गोलकिपरलाई बिट गर्दै एकल प्रयासमा गोल गरेका थिए ।
४. च्याम्पियन्स लिग फाइनलमा पहिलो गोल
कुनै समय थियो, मानिसहरु प्रश्न गर्थे के मेस्सीले युरोपमा इंग्लिस क्लब विरुद्ध गोल गर्न सक्छन् रु उनले २००९ को फाइनलअघि १० पटक इंग्लिस क्लब विरुद्ध गोल गर्न सकेका थिएनन् । तर मेस्सीले जाभीको क्रसमा सन् २००९ को फाइनलमा म्यानचेष्टर युनाइटेड विरुद्ध गोल गरे । पहिलो पटक त्यो खेल मेस्सी भर्सेस क्रिस्टियानो रोनाल्डोको रुपमा चर्चित भएको थियो ।
५. बार्सिलोनाको गोल स्कोरिङ रेकर्ड
मेस्सीले सन् २०१२ मा २४ वर्षको उमेरमा बार्सिलोनाका लागि धेरै गोल गर्ने किर्तिमान तोडे । उनले ग्रानडा विरुद्ध खेलमा ह्याट्रिक गर्दै उक्त उपलब्धी हात पारेका थिए । उनले पहिलो गोल गर्दै सेजार रोड्रिगेजको २३२ गोलको कीर्तिमान बराबरी गरे । त्यसपछि दोस्रो गोल गर्दै कीर्तिमान तोडे र तेस्रो गोल गर्दै कीर्तिमान समेत बनाए ।
६. ५००औँ गोल एल क्लासिकोमा
मेस्सीले सन् २०१७ मा रियल मड्रिड विरुद्धको एल क्लासिकोमा ५ सयौँ गोल पूरा गरे । उक्त खेलको नतिजा बार्सिलोनाको पक्षमा थियो । एल क्लासिको जित, बार्सिलोनाको लागि ५०० गोल र बार्सा अंक तालिकामा शीर्ष स्थानमा । उनले आफ्नो जर्सी खोलेर आइकोनिक सेलिब्रेसन गरेका थिए ।
७. छैटौं पटक बालो डे ओर अवार्ड
मेस्सीले गत डिसेम्बरमा कीर्तिमानी छैटौं बालोन डे ओर अवार्ड जिते । २०१८÷१९ को सिजनमा देश र क्लबका लागि ५४ गोल गरेपछि उनले ५ पटक अवार्ड जितेका रोनाल्डोलाई पछि पारे । अवार्ड ग्रहण गर्दै मेस्सीले आफ्नोअघि अझै राम्रो वर्षहरु भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
८. ला लिगा कीर्तिमान
मेस्सीले सन् २०१४ मा सेभिया विरुद्ध ५–१ को जितमा ह्याट्रिक गरे । उनले टेल्मो जाराको नाममा रहेको २५१ गोलको कीर्तिमान फ्रिकिक गोल मार्फत बराबरी गरे । त्यसपछि उनले अर्को गोल गर्दै कीर्तिमान तोडे, अनि तेस्रो गोल पनि गरे ।
मेस्सीले अहिले ४४४ ला लिगा गोल गरेका छन्, जुन करिब पुरानो कीर्तिमान भन्दा २०० गोलले माथि छ । रोनाल्डोले रियल मड्रिडका लागि ३११ गोल गरेका छन् ।
९. आर्सनल विरुद्ध ४ गोल
सन् २०१० मा आर्सनल विरुद्ध बार्सिलोनाले ४–१ को जित हात पार्दा मेस्सी एक्लैले सबै चार गोल गरे । एक गोलले पछि परेरको अवस्थामा मेस्सीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै चार गोल गरेका थिए । दुई लेगको क्वाटरफाइनलमा बार्सिलोना ६–३ ले विजी हुँदै सेमिफाइनल पुगेको थियो ।
उनले आफ्नो करियरमा पहिलो पटक एकै खेलमा चार गोल गरेका हुन् । मेस्सीले त्यसको दुई वर्षपछि जर्मन क्लब बायर्न लेभरकुजन विरुद्ध च्याम्पियन्स लिग अन्तिम १६ मा ७–१ को जित हात पार्दा एक्लैले ५ गोल गरेका थिए ।
च्याम्पियन्स लिगमा मेस्सीले ११५ गोल गरेका छन् र उनी सर्वाधिक गोल गर्नेमा रोनाल्डो भन्दा पछि छन् ।
१०. विश्वकपमा गोल्डेन बल अवार्ड
सैद्धान्तिक रुपमा हेर्ने हो भने यो मेस्सीको लागि ठूलो क्षण हो, विश्वकपमा उत्कृष्ट खेलाडी घोषित हुनु । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रफी जित्न नसकेको हिसाबले मेस्सी सर्वकालिन उत्कृष्ट हुन् कि होइनन् भनेर भनेर कहिलेकाहीँ बहस हुने गर्छ ।
उनले २००८ मा ओलम्पिक्समा गोल्ड मेडल जितेका थिए । तर सन् २०१४ मा ब्राजिलमा भएको विश्वकपमा नकआउट चरणमा गोल गर्न नसकेका मेस्सीलाई उक्त अवार्ड दिनु अनौठो निर्णय थियो । समूह चरणमा ४ गोल गरेका मेस्सीले नकआउट चरणमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन् । फाइनलमा जर्मनी विरुद्ध हार्दा पनि निराशाजनक प्रदर्शन रह्यो ।
फिफा अध्यक्षा सेप ब्लाटरले पनि केही आश्चर्य भएको बताएका थिए । साथै अर्जेन्टिनी लेजेण्ड म्याराडोनाले यो निर्णयलाई उचित नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । ब्राजिलमा फाइनल पुग्नु नै मेस्सीको लागि विश्वकप जित्ने सबैभन्दा नजिकको सम्भावना थियो । चार वर्षपछि मेस्सीले रसियामा नाइजेरिया विरुद्ध उत्कृष्ट गोल गरेपछि क्वाटरफाइनलबाटै बाहिरियो ।